खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष नै भन्छन्ः बजेट कनिका छरेजस्तो नहोस्
परिवर्तन देवकोटा शुक्रवार, जेठ १०, २०७६, ११:०९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । मुलुक संघीयतामा गएपछि अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो बजेट सार्वजनिक गर्न गईरहेको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य पुरा गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय यतिखेर बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । बजेटमा के कस्ता कार्यक्रम समेट्नुपर्छ ? कति बजेट ल्याउनुपर्छ ? कसरी सरकारले समृद्ध नेपालको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छ ? यी नै विषयमा केन्द्रित गरि जनतापाटीले अर्थविद् एवम् सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ अर्थविद खनालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारको समृद्धिको सपना साकार पार्न कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिले त समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि उच्च आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । यसका साथै यो गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ । अर्थात के हो भने, अहिले छ, रेमिटेन्स ल्याउने, आयात गर्ने, उपभोग गर्ने, बढि सहर केन्द्रित र सिमित मानिसहरुले मात्रै लाभ लिने स्थिती छ । यसलाई हटाउँदै, उत्पादन, प्रविधिमा परिवर्तन गर्दै उच्च, दिगो र जनताको ठुलो हिस्सा विकास प्रक्रिया र प्रतिफलमा सहभागी हुने गराउनुपर्छ । यो नेपालको सन्दर्भमा सम्भव पनि छ । हामी संघीयतामा गएका छौँ । संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र स्थानीय सरकारले के गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर त्यसलाई अलि स्पस्ट गर्दै तिनै क्षेत्रबाट उच्च एवम् गुणस्तरीय आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले ७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ तर यो नै गुणस्तरीय वृद्धि भने होईन ।
अहिले विदेशीने मानिसको संख्या घटेको छैन, धेरै मानिसहरु विकास प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । त्यसकारण अहिलेको विकासको बाटोमा परिवर्तन गर्ने र हामीलाई तुलनात्मक रुपमा लाभ दिने र सम्भावना भएका क्षेत्रमा अर्थात बढि लगानी गर्ने र सरकारले गर्ने लगानीलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा पठाउनु पर्छ । त्यस्तै नीजि क्षेत्रको लगानीलाई थप रुपमा परिस्कृत गर्ने, त्यस भित्र विदेशी लगानी भित्र्याउने, सम्भावना भएका ठाउँमा सहकारीहरुलाई पनि संलग्न गराउनु पर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारको मात्र नभई निजि क्षेत्रको लगानी पनि पठाउनुपर्छ । सँगसँगै सरकारले समृद्ध नेपालका साथै सुखी नेपाली पनि भनेको छ, यसका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, युवालाई रोजगारी, हुँदै सामाजिक न्याय र समानता सबै नेपालीले विकासको समयमा लाभ, अवसर मिलेको अनुभूत गर्ने खालको समृद्धितर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने क्षेत्रहरु, यसको प्रक्रिया लगायतमा नयाँ ढंगले पुनर्संरचित गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा नीतिगत कुरा, क्षेत्रगत रकम विनियोजनका कुराहरु, कार्यक्रम र परियोजनाहरुको प्राथमिकिकरणका कुराहरु, यी सबै उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी गर्ने हिसाबले जानुपर्छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत ‘ऐतिहासिक आर्थिक वृद्धि’ गर्ने पनि भनेको छ । तर अहिले पुँजीगत खर्च नौ महिनामा ३५ प्रतिशत पनि भएको छैन । केहिदिनअघि सम्ममा पनि ४०-४२ प्रतिशत भन्दा बढि भएको छैन । सरकारले बालुवामा पानी खनाएजस्तो सयौं परियोजनामा खर्च गरिरहेको छ । लागत बढेको बढ्यै छ । गुणस्तर घटेको घट्यै छ । समय थपेको थपै छ । विदेशीने युवाहरु झन् बढिरहेका छन् । यी सबैलाई एकैपटक सुधार गर्न सकिँदैन तर सुधार हुन्छ भन्ने ठोस सन्देश दिँदै नयाँ ढंगले बजेट आउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च एकदम कम मात्रामा गर्न सकेको छ, यसको कारण के होला ?
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको म अध्यक्ष पनि हुँ । हामीले आयोगमा सबैभन्दा बढि फोकस गरेर हेरेको क्षेत्र पनि यहि हो । त्यसमा हामीले दुईवटा कुरा सँगै राखेर हे¥यौँ, एउटा भनेको, बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा ल्याउँदा समस्या भयो, बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने हिसाबले जेठ १५ मा ल्यायौँ । यति मात्रै होईन । साउन १ देखि साउन १५ गतेसम्म बजेटमा, कार्यक्रममा, परियोजनामा, जहाँजहाँ जति रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ, त्यसको चौमासिक वा कुनै समयमा विभाजन गरेर फस्र्ट इन्स्टलमेन्ट साउन १५ गतेभित्र त्यहाँ निकासा गर्नुपर्र्ने हुन्छ । तर पनि अहिलेसम्म पनि पुँजीगत खर्चमा हाम्रो अवस्था उस्तै छ । यसको स्थिति त कस्तो छ भने, असारमा कुल पुँजीगत खर्चको ३५ देखि ४० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।
अब तपाईं आफैं कल्पना गर्नुस् न, यस्तो ढंगले खर्च भएपछि कस्तो तरिकाबाट यो खर्च हुन्छ होला, र सदुपयोग हुन्छ होला ? यसैलाई आधार बनाएर हामीले आयोगबाट सुझाव दिएका थियौँ । त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने, यो बजेटको सिङ्गो प्रणाली नै, बजेट विनियोजन, खर्च र कार्यान्वयनको सिङ्गो प्रणालीमा नै एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएर समस्यााहरु जेलिएर आएका छन् । जटिल बनेर आएका छन् । यी कुराहरुलाई सरकारले सम्बोधन गरेर मात्रै पनि समाधान भएन । त्यसैकारण, परियोजनाको चयन, कार्यक्रमको चयन गर्दा सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ । ठेक्का कहिले गर्ने हो, विभिन्न चरणमा काम कसरी सम्पन्न गर्ने, निर्माणका सामाग्रीहरुको कसरी आपूर्ति गर्ने, कुन समयभित्र जग्गा खरिद गर्ने, त्यहाँ आवश्यक म्यानपावरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कार्यन्वयन कसरी गर्ने, कायान्वयन गर्दा हुने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, साधनको गलत प्रयोग भएमा यसलाई कसरी रोक्ने, अर्थात, जुन लक्ष्य राखिन्छ, त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने कुराको बजेटको प्रक्रियामा ठोस कार्ययोजना पनि समावेश गरिनुपर्छ ।
त्यो कार्ययोजना ठोस रुपमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई जेठ १ देखि साउन १ गतेसम्ममा दिने र त्यहि जिम्मेवारी मन्त्रालयले परियोजनालाई दिने गर्नुपर्छ । त्यस्तै प्रत्येक महिनाको कार्य प्रगतीको रिपोर्टिङ गर्ने, दुई महिनामा मन्त्रालयमा, तीन महिनामा योजना आयोग वा चार महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यलयमा रिपोर्टिङ हुने र यस भित्र पनि कति बजेट खर्च भयो, भौतिक प्रगति कति भयो, या के कारणले भएन भन्ने कुराको बाहिर सम्प्रेशण गर्ने । मुलतः कस्को कहाँ, के काम छ, त्यो जिम्मेवारीपूर्ण, पारदर्शी परिपाटीलाई सिङ्गो बजेट प्रक्रिया र बजेट कार्यन्वयनको एउटा अंग बनाउने गरेमा मात्रै पुँजीगत खर्च सहि ढंगले गर्न सकिन्छ । यहाँ त पुँजीगत खर्च भयो भएन भन्ने मात्रै कुरा भयो ।
मलाई यो अझै चिन्ताको विषय लाग्छ । यहाँ त साधनको कसरी गलत प्रयोग भयो भन्ने तर्फ ध्यान नै छैन, ध्यान त खर्च भयो भएनमा मात्रै गयो । ६ खर्ब भन्दा बढि त बेरुजु निस्किएको छ । यो घटाउने कुरै छैन । यस कारण स्रोतसाधनको गलत प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु पनि जरुरी छ । साउन १ गतेदेखि नै बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने कुरालाई सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्रै पुँजीगत खर्च सहि समयमा सहि तरिकाले गर्न सकिन्छ ।
सरकारले लिएको राजश्वको खर्च पुरा गर्न सरकारलाई धौधौ भएको देखिन्छ, यसमा सरकार कहाँ चुक्यो ?
आम रुपमा अहिलेपनि मूल्य अभिविद्धि कर क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उठेको भन्ने कुरा अध्ययनहरुले देखाएको छ । व्यापक मात्रामा कर छलि भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष करको आधारलाई पनि ठिक ढंगले बढाउन सकिरहेको छैन । आयकरको दायरा बढाउने, विभिन्न प्रकारका चुहावटहरुलाई रोक्नेतर्फ जति सजकता हुनुपथ्र्यो त्यति भएको पाईन्न् । गैर कर राजस्व पनि आशा गरेजति आएको अवस्था छैन । विगत केहि वर्ष देखि हाम्रो अलि सहज स्थिति भनेको राजस्वमा थियो, दक्षिण एसियाली ‘जिडिपी’को शेयरको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा राजस्वकोृ अनुपात राम्रो छ । कुनै वर्ष त लक्ष्य भन्दा बढि पनि उठेको अवस्था थियो ।
अहिले त्यो कम भएको छ । यसको सन्तुलन मिलाउन करको आधारहरु बढाउनुपर्ने, कर छलिलाई रोक्ने, करदाताले व्यहोर्ने प्रक्रियागत झन्झटहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुुपर्छ । यसलाई अझ सरल, छोटो , सहज एवम् प्र्रक्रियागत बनाउने तर्फ ध्यान दिँदै मानिसलाई स्वस्फुर्त राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
बजेट महत्वाकांक्षी ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने पुरानै प्रवृति छ नी, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
कतिपय कुराहरु अहिले नै सुधार हुन सक्दैन । कतिपय तत्कालै पुरा गर्न सक्ने र कतिपय मध्य र दिर्घकालीन रुपमा पुरा गर्न सक्नेहरु छन् । अख्तियारले पनि नौ सय भन्दा बढि परियोजनाहरु काम नलाग्ने ल्याएको छ । त्यसकारण सरकारले अहिले काम नलाग्ने परियोजनाहरुलाई ड्रप गर्नुपर्छ, र खर्चको वर्गिकरण पनि अलि वैज्ञानिक गर्नुपर्छ । जुन परियोजनालाई पनि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृति छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ । जिम्मेवार पूर्वक लैजानुपर्ने कामलाई वर्गिकररण गरेर जानुपर्छ । अझै पुँजी निर्माणमा पनि बढि फोकस गरेर बजेटको प्रक्रियालाई चुस्त, दुरुस्त, गराउनुपर्छ । यसका साथै सरकारले आम्दानी र खर्चलाई ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
दुई तिहाई बहुमत सहितको शक्तिशाली सरकारले देखेको सपना पुरा गर्न बजेटको आकार चाहिँ कस्तो हुनुपर्ला ?
अहिले दुई तिहाई जनमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी छ । जसलाई कार्यान्वयन गर्न १६ खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्न जान्छ भन्ने मेरो ठम्याई छ । सरकारले हवाई मार्गदेखि, स्मार्ट सिटि, औद्योगीक क्षेत्र लगायतका विभिन्न योजनाहरु अघि सारेका छन्, यी महत्वकाँक्षी योजना हुन् । तर सरकारलाई यो बाध्यता पनि थियो । किनकी सरकारले जनतामाझ जुन प्रतिवद्धता जनाएको थियो, र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्नका लागि महत्वकांक्षी हुनु पनि पर्छ ।
अबको सन्दर्भमा केन्द्रले सबैकुरा होल्ड गर्ने कुरालाई विल्कुलै छाडिदिने, प्रदेशको अधिकार प्रदेशलाई छोडिदिने र स्थानीयको अधिकार स्थानीयलाई । त्यसपछि उनीहरुले गर्ने योगदानबाट उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने तर्फ सरकार जानुपर्छ । त्यस्तै, छिटो सम्पन्न गर्ने परियोजनाहरु सबै सरकारले गर्ने भन्दा पनि नीजि क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसरी सरकारले नीजि क्षेत्रलाई समेत लगानीमा सहभागी गराउने रणनीतिबाट काम गर्नुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ताकस्ता कुराहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ?
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरुमा ९ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषी, उद्योग, पुर्वाधार, उर्जा, प्रविधि, पर्यटन, लगायतका योजनाहरु अघि सारिएको छ । त्यो प्राथमिकता अनुररुप उत्पादनशील हिसाबले ति क्षेत्रमा कार्यक्रमलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको जुन क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रहरु आउँछन्, उनीहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नयाँ ढंगले काम गर्नेगरि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया, के भन्छन् अर्थविदहरु ? सरकारले ल्याएको बजेट कनिका छराई मात्रै ... बुधवार, जेठ १५, २०७६, १९:२०:००
स्मार्ट लाईटले झलमल ललितपुर महानगर ! अहिले बलिरहेका सोलार लाइटहरु अधिकांस धुलोमैलोले मधुरो भएका छन् । मधुरो सोलार लाइटबाट रातको समयमा पत्रिका पढ्न समेत नसकिने अवस्था रहेको छ । सोलार बत्तिहरुको व्याट्री प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा परिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुनाले पनि यसको खर्च बढि लाग्छ । बढि खर्च गर्नुभन्दा पनि यसलाई विस्थापन गरेर नयाँ स्मार्ट ट्राफिक लाईट बाल्नु उपयुक्त हुनेछ । मंगलवार, फाल्गुन २१, २०७५, १३:५०:००
लगानी सम्मेलनलक्षीत विधेयक संसदबाट पारित हुँदै, यस्तो छ लगानी भित्र्याउने व्यवस्था मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिगो विकासका लागि भन्दै मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याईन लागेको मन्त्रालयले बताएको छ । शुक्रवार, चैत्र ८, २०७५, १२:३६:००
‘राजस्व छल्ने साना ठूला कसैलाई छाडिन्न’ - महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली
‘आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा ‘गेम चेञ्ज’ हुँदैछ’ - डा. युवराज खतिवडा
‘बीमा क्षेत्रमा आउने जोखिमप्रति बीमा समिति सजग छ’ - चिरन्जीवी चापागाईं
‘भ्रमण वर्ष २०२०’ व्यापार विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर